မြစ်ဆုံ: သွားကြားထိုးတံ တစ်သိန်းဖြင်. တည်ဆောက်ထားသော ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို.နန်းတော်
သွားကြားထိုးတံ တစ်သိန်းဖြင်. တည်ဆောက်ထားသော ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို.နန်းတော်
အံ.ဖွယ်လက်ရာဖြင်. တည်ဆောက်ထားသောနန်းတော်ကို မစ္စတာ ဝေ.ဗာ မှ Rolling Through the Bay ဟု အမည်ပေးထားပါတယ်။ သွားကြားထိုးတံ စုစုပေါင်း တစ်သိန်း အသုံးပြုထားပါတယ်လို. ဆိုပါတယ်။ မျှော်စစ်နှစ်ခု ရွှေရောင်ဂိတ်ပါသော ပန်းခြံ စသော အံသြဖွယ် လက်ရာမြောက်လှသော အနုစိတ် သင်္ကေတကို နာရီပေါင်း သုံးထောင် ကျော်ဖြင်. အချိန်ယူတည်ဆောက်ခဲ.သည်။
သွားကြားထိုးတံအချို.မှာ အိမ်နီးချင်း အီတာလန် စားသောက်ဆိုင်မှလို. ဝေ. မှ ဆိုပါတယ်။ ထူးဆန်းသည်မှာ သွားကြားထိုးတံ များကို နိုင်ငံစုံ တံဆိပ်မျိုးစုံမှ အသုံးပြုထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသွားကြားထိုးတံ များကို နိုင်ငံရပ်ခြား များရှိ ဆွေမျိုးများထံ အလည်အပတ်သွားရင်းနဲ. စုဆောင်းခဲ.တယ်လို. ဆိုပါတယ်။ ရွှေရောင်ဂိတ်ဖြင်.ပန်းခြံကို ကင်ညာ မော်ရိုကို စပိန် အနောက်ဂျာမဏီ အီတလီ တို.မှ ယူဆောင်လာခဲ.သော သွားကြားထိုးတံများဖြင်. ပြုလုပ်ထားသည်။ အတွင်းပိုင်းတွင် အသုံးပြုထားသည်မှာ သူ မင်္ဂလာဆောင်ခဲ.စဉ်က ဧည်.သည်များ သုံးခဲ.သောသွားကြားထိုးတံများ ဟု ဝေ.မှ ဆိုပါတယ်။
ဝေ.မှ ရှင်းပြထားသော ဗီဒီယိုဖိုင်ကို http://vimeo.com/22461692 တွင် သွားရောက်ကြည်.ရှုနိုင်ပါသည်။
Posted by မောင်မောင် at 23:02
အွန် သုံးပီ;သားတွေ ရွံထှာ လုပ်စရာရှားလို့ ဟာ
သွားကြားထိုးတံတောင် ကြံကြံဖန်ဖန်ဗျာ.... အနုပညာမြောက်အောင် လုပ်တတ်လိုက်ကြပ။ အချိန်ရော၊ ၀ါသနာရော တော်တော်လေးကို ပေါင်းစပ်ရမယ်ထင်တယ်....
တကယ်ကို အံ့သြဖွယ်ရာ အနုပညာပါပဲရှင်။
ဟီးးးးးး ဟုတ်ပါ. တီတင်.။ ဆေးပြီးမှဘဲသုံးမှာပေါ.ဗျာ။